Izibalo Zokumaketha Kwamaselula zango-2015 | Martech Zone
Akumangalisi ukuthi sabelana ngale infographic ngosuku esivakashele ngalo indlunkulu ka I-Bluebridge, ipulatifomu yesicelo sedijithali yeselula. Sasinohlelo lokusebenza lweselula oluqinile, kepha inkampani yasuka kude neselula, manje sesibambeke ngohlelo lokusebenza lweselula oluphukile.
Siyazi ukuthi silahlekelwa ukuzibandakanya okuthile ngokungafaki okuqukethwe kwethu endaweni yesikhulumi. Kade sibheke phambili ekutholeni inguqulo entsha, futhi iBluebridge ineqoqo elihle kakhulu lamathuluzi. Benza umsebenzi omangalisayo futhi bakhula ngokushesha.
Ukwanda okusheshayo kokutholwa kwe-smartphone nethebhulethi kuthinte cishe zonke izici zokumaketha kwedijithali. Ububanzi bomthelela busuka kuzinguquko zakamuva kakhulu ze-'Smobile-friendly 'algorithm kwimiphumela yokusesha ye-smartphone yakwaGoogle kuya emazingeni aphansi okuguqulwa kuma-smartphones, ukusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana kuselula nokuqinisekisa ukuthi ama-imeyili ethu ayasebenziseka. UDave Chaffey
Amaphuzu avelele avela ku-The State of Mobile Marketing 2015
Isikhathi esingu-86% sisetshenziselwa izinhlelo zokusebenza zeselula uma kuqhathaniswa newebhu ephathekayo. Uma ufisa ukuzibandakanya ngeselula, sekuyisikhathi sokutshala imali kuhlelo lokusebenza leselula!
Abathengi abangama-90% basebenzisa izingcingo zabo imisebenzi yangaphambi kokuthenga futhi abathengi abangama-84% basebenzisa amadivayisi abo ukusiza ukukhombisa ngenkathi basesitolo.
Ama-25% esewonke imibuzo yokucinga manje sezisetshenzisiwe.
Ngo 2016, ukusetshenziswa kwesikhangiso okuhambayo izodlula ukuchitha kudeskithophu, ifinyelele cishe kuma- $ 70 billion emhlabeni jikelele.
Izilinganiso ezivulekile ze-imeyili yeselula sebekhule ngo-180% eminyakeni emithathu, ngama-48% awo wonke ama-imeyili avulwe ku-smartphone.
Tags: 2015ukusetshenziswa kwesikhangiso okuhambayoizicelo zeselulaIzinhlelo zokusebenza zeselulaisilinganiso esivulekile se-imeyili yeselulaukumaketha kwamaselula infographicizibalo zokuthengisa zeselulaizibalo zokumaketha zeselulausesho lweselula
I-RelateIQ: I-CRM Yobudlelwano Bobuhlakani Obunobuhlakani